Duqeyn khasaare geysatay oo galabta ka dhacday gobolka Shabeellaha hoose & Xaaladda oo… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Duqeyn khasaare geysatay oo galabta ka dhacday gobolka Shabeellaha hoose & Xaaladda...
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Gobolka Shabellaha hoose, ayaa sheegaya in galabta maanta duqeyn ay ka dhacday Magaalada Kuunya Barow oo ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose.
Duqeyntaan ayaa waxaa fulisay diyaarad dagaal oo loo maleynaayo inay leeyihiin Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka hawlgala.
Laba gantaal ayaa waxaa la sheegay diyaarada inay ku dhufatay duleedka Magaalada Kuunya Barow, halkaasi oo lagu soo waramaayo inay ka dhasheen Khasaare dhimasho.
Warbaahinta ku hadasha Afka Shabaabka ayaa waxa ay sheegeen duqeyntaasi inuu ku dhintay nin Ganacsade ah oo magaciisa ay ku sheegeen Ismaaciil, kaasi oo goob ganacsi ku lahaay Magaalada Kuunya Barow, balse xilliga duqeynta ay dhaceysay ku sugnaa duleedka Magaalada.
Al-Shabaab ayaa waxa ay xaqiijiyeen geerida ninkaasi ganacsadaha ah, balse ma aysan sheegin khasaare kale oo ka dhashay duqeyntaasi.
Magaalada Kuunya Barow ee Gobolka Shabellaha hoose, waxaa gacanta ku haayo Ururka Al Shabaab, waxaana halkaasi ku sugan Saraakiil badan oo Ururkaasi ka tirsan.
Duqeymaha noocaan oo kale ah ayaa inta badan waxaa fuliya diyaaradaha Drones-ka Mareykanka ee hawlgalada ka fuliya gudaha Somaliya, gaar ahaan dhulka Shabaab ay maamulaan.
Diyaarad duqeyn ka geysatay Shabeellaha hoose
Diyaaradaha Droneska Mareykanka